Iingxaki zeCompord ezindizayo
Idibeneyo Iingxaki zeCompord ezindizayo
iinyanga 1 kunyaka 6 eyadlulayo #713 by casbad
Ingaba kukho na umntu onenkinga yokubhabha umncintiswano? Endikufumene kulo mbono uzama ukungibulala .... (iqhubhisa kwaye igubungele kunye neesalathisi zecala ngexesha lokuhamba)
iinyanga 1 kunyaka 6 eyadlulayo #714 by Dariussssss
Zininzi zeeplani apha ziphukile ... akukho nto entsha. I-Concorde ilungile, kodwa idinga ulwazi oluninzi. Kufuneka uthumele i-fuel ALL ITIME. Leyo yindlela kuphela yokubhabha isisigxina.
iinyanga 1 kunyaka 6 eyadlulayo #716 by Gh0stRider203
Ewe baqhekekile kuba ba-Airbus! I-LOL Ndifungela Ndibone ezinye izithuba malunga neengxaki zeenqwelo zeenqwelo zomoya ngaphandle kokuba ndi-Boeing
iinyanga 1 kunyaka 6 eyadlulayo #720 by casbad
Dude !!!! Ngaba uyazi indlela inkqubo yokudluliselwa kwamafutha esebenza ngayo? Ndakuzama ukuxubana nayo kuninzi ukujonga kunye nokuphepheza ... ngaba kukho naziphi na izinto zokufunda?
1 unyaka we1 iveki edlulileyo #947 by DRCW
Ikhonkco yinkomo eyahlukileyo yonke, ndawonye nantoni na ebonisa ukuhamba kwendiza. Isiko sobumdaka kufuneka sibalwe. Ubungakanani bamele baqwalaselwe, njengoko isikhumba seenqwelo-moya sivutha ngesivinini esiphezulu. Bala umgibeli kunye nemithwalo ukuya kwiziko lakho. Funda iinkqubo kumgca. Funda malunga neenqwelo. Kukho iphutha lesilumko esilumkileyo kwi-moya eyenziwayo ezindlebeni ngendlela yomculo ephosakeleyo. Umdali ufake le fayili kwifolda yomsindo wendiza ngephutha. Ukuyilahla, vula ifolda yomsindo uze uhambe kwiisampuli zomsindo uze ufumane umkhondo omculo ombi, uze uchofoze ngokuchanekileyo uze uyisuse, konke kulungile.
Ixesha ukwenza page: 0.575 imizuzwana